Tag: suuq-geynta channel-ka | Martech Zone
Tag: suuq-geynta kanaalka
Khamiis, May 7, 2015 Jimco, Febraayo 2, 2018 Douglas Karr
Jenn iyo waxaan booqannay xarunta Genesys usbuucan waxaanan fariisanay kooxdooda suuq geynta dijitaalka mid ka mid ah su'aalaha soo kordhay waxay ahayd hadaan waligeen qormooyin ka dambeeya diiwaangelinta. Waxaan si deg deg ah uga jawaabnay inaanan waligaa horay u qaban. Kooxda isdhexgalka waxay sheegeen inay tijaabo ku sameeyeen warqad cad iyo mid sawir leh isla markaana 0% ay diiwaangeliyeen oo ay soo dejiyeen warqadda cad oo 100% ay u diiwaan gashan yihiin
Adeegyada Suuqgeynta ee Khibradaha 'suuqgeynta kanaalka' waxay awood u siineysaa sumadaha inay maareeyaan oo ay fuliyaan dhammaan isdhexgalka macaamiisha hal nidaam oo keliya, waqtiga dhabta ah - iyaga oo ka saaraya baahida loo qabo dhowr madal oo kaladuwan iyo kala iibsiga shakhsiyaadka. Barxadku wuxuu awood u siinayaa noocyada inay si fudud ula midoobaan fikradaha macmiilka ilo kasta oo xog ah si ay u abuuraan caqli badan, oo wax ku ool ah, isdhexgalka macaamiisha ee ku saabsan emaylka, moobiilka, bulshada, shabakadda, daabacaadda iyo muujinta xayeysiinta. Barmaamijka Suuqgeynta ee Khabiirada Iskuduwaha ee Khibrada Bixiya: Isdhexgalka xogta - Kasbasho run
Ma hubo haddii ay jiraan wadahadal ka dhacaya adduunka suuq-geynta oo aan ku jirin waxyaabaha ku jira. Arrinta ku jirta marxaladdan ayaa maareynaysa istiraatiijiyad suuq-geyn ah oo ka kooban kanaallo badan. Dad badani way quustaan ​​oo waxay u riixdaan dhawr dhexdhexaadiyayaal ah, laakiin ballanqaadku wuxuu ku jiraa ka faa'iideysiga qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha ku habboon ee ku saabsan dhammaan nooc kasta oo loo qaybiyay dhagaystayaal kasta. Brightcove infographic, Sameynta Suuq-geynta Mawduuca Shaqada ee Bulshada, Dunida Wareegta, waxaa ku jira runtii xog xiiso leh oo ku saabsan sababta